Nhau - Epidemic yekudzivirira uye yekudzivirira matanho _ Denda rekudzivirira ruzivo
Denda rekudzivirira uye kudzora matanho _ Denda rekudzivirira ruzivo
Novel Coronavirus Epidemic Kudzivirira Kuyera
1 the Ruzhinji rwevanhu rungazvidzivirire sei kubva kune nyowani chirwere chemabayo?
1. Deredza kushanya kunzvimbo dzakazara vanhu.
2. Gara uchifefetedza kamuri yako kumba kana kubasa.
3. Nguva dzose pfeka chifukidziro kana uine fivha kana kukosora.
4. Geza maoko ako nguva zhinji. Kana ukavhara muromo wako nemhino neruoko rwako, tanga wageza maoko.
5. Usazora maziso ako mushure mekuhotsira, tora zvakanaka kuchengetedzeka uye hutsanana.
6. Panguva imwecheteyo, veruzhinji havadi magogogi kwechinguva, asi vanogona kuzvidzivirira nemasiki.
Teerera Uye Ita Dziviriro
Hutachiona ihwohwo inoverengeka Coronavirus iyo isina kumbobvira yawanikwa pamberi penyika. Nyika yakaronga ino novel Coronavirus hutachiona se b kirasi inotapukira chirwere, uye yakatora nzira dzekudzivirira nekudzivirira kwechirwere chinotapukira chekirasi. Parizvino, matunhu akati wandei akatanga yekutanga-chikamu kupindura kune hukuru hutano hweveruzhinji emergency.Ndinovimba veruzhinji vanozozviteererawo voita basa rakanaka mukuzvidzivirira.
3. Maitiro ekuita rwendo rwebhizinesi?
Inokurudzirwa kupukuta mukati uye mubato wegedhi remota dzepamutemo kamwe pazuva ne75% doro. Bhazi rinofanira kupfeka mask. Zvinokurudzirwa kuti bhazi ripukute mubato wemusuwo uye mubato wegonhi ne75% doro mushure mekushandisa.
4. Pfeka mask zvakanaka
Masiki ekuvhiya: Inogona kuvhara kusvika ku70% yebhakitiriya. Kana iwe ukaenda kunzvimbo dzeruzhinji usina kusangana nevanhu vanorwara, mask yekuvhiya yakakwana.Medical kinga mask (N95 mask): inogona kuvhara 95% yebhakitiriya, kana ukabata murwere anofanira kusarudza iyi.
Pamberi nedenda rekudzivirira kudzivirira, kugadzirwa kwekuchengetedza zvese zvinobata zvakasimba.Munguva dzehondo, usaregedze; munguva dzekudzivirira uye kutonga vazhinji, ita basa rakanaka.Kuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kunoitwa, weichuang ichave nerinani mangwana !!!
Post nguva: Jun-05-2020